“जिन्दगी जिउन भन्दा मर्न गार्हो रै, छ दिदी” - Butwal Online
के गर्नु कर्म फुटेको भएपछि भाग्यले पनि ठग्दो रहेछ । जब आफ्नो श्रीमानले हेला गर्छ, तब सबैको हेलाको पात्र भइदो रहेछ । सबै बलेको आगो मात्र ताप्ने रैछन् । यसरी आप्mनो पीडा पोख्छिन्, देवदह ढेकारकी २४ वर्षे विपना ।
स्कुल पढ्दा पढ्दै पे्रेम विवाह गरेकी विपनालाई घर न घाटको भएजस्तै महसूस भएको छ । विपना भन्छिन् पहिला सबै राम्रो थियो अहिले श्रीमान केही काम गर्देनन् सधै जसो रक्सी खाएर टिल्ल परेर आउँछन् । आएर केही नगरे त हुन्थ्यो नी ज्यान जोगाउनै मुस्किलपर्छ । साना छोरा छोरी छन् । जाउ भने कहाँ जाऊँ मैले पनि छोडेर गएभने छोराछोरीको सराँप लाग्ला बसुँ भने बसेजस्तो छैन् ।
दुइपटक आत्मा हत्याको प्रयास पनि गरे । फेरी ति छोराछोरीको मायाले मलाई मर्न दिएन् फर्केर आए । मर्नलाई पनि सजिलो रहेन्छ । ठूलो छोरा ५ वर्षको भयो उसले मम्मी मलाई छोडेर कहिं नजानु भन्छ आँखाभरी आँसु झार्दे सुक्क सुक्क गर्दे भक्कानिइन् बोल्नै सकिनन् ।
देवदह नपा–१२ की शुशिला १९ वर्षकी भइन् ।
शुशिलाका ४ वर्षका एक छोरा छन् । शुशिलाको ४ वर्ष अगाडी मागी विवाह भएको हो शुशिलाका श्रीमान पूर्व लागु पदार्थ प्रयोगकर्ता रहेछन् । शुशिला भन्छिन् मेरो विवाह पहिला ढाटेर, झुक्काएर गरियो । गाँजा चरेस, भाङ धतुर सबै खाने मान्छेसँग विवाह गरिदिए । विवाह भएको ४, ५ महिनासम्म मलाई र मेरो माइतीलाई केही पनि थाहा थिएन् एक्कासी भैरहवा पुलिसले समातेपछि बल्ल थाहा भयो कि पहिला पनि पुलिस केसमा परिसकेको मान्छे रै ’छ
मेरो विवाह पहिला ढाटेर, झुक्काएर गरियो । गाँजा चरेस, भाङ धतुर सबै खाने मान्छेसँग विवाह गरिदिए । विवाह भएको ४, ५ महिनासम्म मलाई र मेरो माइतीलाई केही पनि थाहा थिएन् एक्कासी भैरहवा पुलिसले समातेपछि बल्ल थाहा भयो कि पहिला पनि पुलिस केसमा परिसकेको मान्छे रै ’छ
पुलिस केश लागेपछि ३ महिना भैरहवामा राख्यो र छुट्यो । अब त सुध्रिएला बुद्धि पलाउला भने तर उसलाई बानी परिसकेको रैछ, उसले घरमा भएका किम्ती सामानहरु पनि बेचेर सकायो हुँदाहुँदा त सुतेको बेलामा मेरो घाटीको मंगलसुत्र पनि लगेर बेचेर खाइदियो । के गर्नु उस जुनीमा मैले के गल्ती गरेको रहेछु त्यसको सजाय पाउँदै छु ।
कहिलेकाँही त लाग्छ आमाछोरा दुबै एकैचोटी मर्न पाए नी हुन्थ्यो ………मलिनो स्वरमा लामो स्वास तान्दै भनिन् । एकपटक रोहिणी खोलामा बाढी आएको बेला छोरासँगै हाम फालेर मर्छु भनेर घरबाट हिडे १२ सय पैसा र कानमा लगाएको टप खोलेर टेवलमा राखिदिए म मरेपनि दुई चार दिन खाओस भनेर । बाडी ओर्लेर आयो बाबुले मम्मी घर जाने भनेर खुब रोयो फेरि मनमा विभिन्न कुरा खेले फेरी फर्केर आए ।
देवदह सिक्टनकी बसन्ती २३ वर्षकी भईन उनका एक छोरा र एक छोरी छन् । बसन्तीका श्रीमान मजदुरी काम गर्छन् । बसन्ती भन्छिन् । दिनभरी सँगसँगै ईटा भट्टामा मजदुरी गर्छो साँझ आएर सबै पैसा रक्सीमा उडाउछन्, एक दिन काम गर्न गए ७ दिन काममा जादैन्, रक्सी खाँदै कराउदै घरमै बस्छन् ।
केही बोले खाए त मेरै कमाई खाए तेरा बाउको खाएको छैन भन्दै जे पायो त्यही टिपेर हिर्काउँछन् । एक पटक ईटाले हानेर मेरो दाइने हात नारीबाट भाँचिदिए । रक्सी नखाँदा ठिकैछन खाएपछि बौलाउँछन् । जे भेटायो त्यसैले झटारो हान्छन् । दुइओटा छोराछोरी छन् यिनीहरुलाई कसरी हुर्काउने, के गर्ने कसरी जीन्दगी जानसक्छ यसरी….. लामो स्वास फेर्दे आँखाबाट आँसुका ढिक्का खसाल्दै भनिन् ।
जीन्दगी जीउन भन्दा पनि मर्न साह्ै गाहे रैछ दिदी कस्तो मान्छेसँग मेरो विवाह भएछ । छोरा छोरीको कारणले गर्दान मर्न सक्छु न बाँचेर बाँचे जस्तो भएको छ आँखाबाट बरर आँसु खसाल्दै भक्कानिइन् ….।
देवदह नपा सिक्टनकी पार्वती २६ वर्षकी भईन पार्वतीका श्रीमान गाडी चालक हुन् उनले बुटवल भैरहवा चल्ने माइक्रो बस चलाउँछन् । पार्वती भन्छिन् गाडी चलाए पनि श्रीमानले कमाएको पैसा रातो हुन्छ की सेतो हुन्छ अहिलेसम्म देखेकी छैन् । घरमा बुढा बा आमा हुनुहुन्छ केही वास्ता छैन् ।
घरमा कहिलेकाँही आउँदा पनि रक्सीले मातेर आउने र झगडा मात्र गर्छन् । केही बोल्न हुँदैन के कुरा गर्नु कुरा गरे आफ्नै बेइजत हुन्छ । तीन वटा छोरा छोरी बुढा बा आमा कसरी के गरेर जीन्दगी बिताउनु यस्ता अधर्मीसँग । छोराछोरीले एउटा दानो चकलेट पनि खाएका छैनन् । गाडी चलाउछु भन्छन् गाँजा खाएर बरालिएको जस्तो लाग्छ । घरमा आउँदा खाएर बेहोसी तालमा आउने हो । त्यस्ताको के आँस गर्नु दिदी ।
विपना,शुशिला, पार्वती र बसन्ती मात्र होइन् सानै उमेरमा विवाह गरेर अनेकौन प्रकारका शारिरीक तथा मानसिक पीडा खेपिरहेका महिला, दिदी बहिनीहरु धेरै छन् हाम्रो समाजमा । विभिन्न किसिमका पीडा खेपेर पटक–पटक मरेर बाँचिरहेका छन् ।
कतिपयले यस्तै कारणले गर्दा आत्माहत्यासम्म गर्न पुग्छन् ।नेपाल प्रहरीको प्रदेश नं. ५ को तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने भने पनि आत्मा हत्या गर्नेको संख्या डर लाग्दो छ । प्रदेश नं. ५ का १२ वटा जिल्लामा आत्माहत्याको अवस्था निम्न अनुसार तालिकामा देख्न सकिन्छ ।
जिल्लाको नाम आव.०७३÷०७४ आव.०७४÷०७५ आव.०७५÷०७६ जम्मा संख्या
रुपन्देही १६५ २२७ १७३ ५६५
कपिलवस्तु ७८ १०१ ९५ २७४
पश्चिम नवलपरासी १७६ ९२ ७० ३३८
पाल्पा ५५ ६७ ७६ १९८
गुल्मी ७१ ५८ ३६ १६५
अर्घाखाँची ४८ ५५ ३३ १३६
दाङ् १४६ १९४ १५६ ४९६
प्यूठान ६२ ५९ ५३ १७४
रोल्पा ६६ ४३ ४६ १७५
रुकुम पूर्व ० १ ९ १०
बाँके ११९ ६३ ४३ २२५
बर्दिया १४५ १०८ ६८ २३१
प्रदेश न ं ५को रुपन्देही जिल्ला आत्मा हत्याको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला हो । जहाँ सबैभन्दा बढी आत्मा हत्याका घटनाहरु भएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
यस्ता खालका घटनाहरु हुनुमा सबैभन्दा मुख्य कारण घरेलु हिंसा जस्तैः शारिरीक, हिंसा, सामाजिक हिंसा, मानसिक हिसा, यौनिक हिंसा, आर्थिक हिंसा लगायतका समस्याहरुको कारण हो भन्ने लाग्छ । त्यसकारण यस्ता खालका हिंसाहरुको अन्त्य गर्नका लागि तीनवटै तहका सरकारले आफ्नो कार्ययोजनामा यस्ता खालका सवालहरुलाई समेट्न जरुरी हुन्छ त्यसको लागि सबैले सचेत रहुनुपर्छ ।